What is Dental Implant? | LATHA DENTAL CLINIC
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သွားကို ပြန်စိုက်တော့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဘယ်အရာကို အရင်ဆုံးတွေးမိတာလဲ
သွားစိုက်နည်းလား နာကျင်ရတာလား သွားစိုက်ခလား ဆရာဝန်လား ဆေးခန်းလား …
ဒီလို အများကြီးစဉ်းစားနေရတဲ့ အရာတွေ ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့ ..
ခေတ်မီကုသနည်းတွေ အများကြီးရှိလာသလို အရင်တုန်းကလို သွားစိုက်ဖို့ ခဲယဉ်းမှုတွေ သွားစိုက်ပြီးရင်လည်း ရှောင်ရဆောင်ရတွေ မရှိသလောက် နည်းပါးနေပြီမို့ သွားစိုက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲကမှ ရေရှည်ခံတဲ့ သွားစိုက်နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dental Implant အကြောင်းအနည်းငယ် ပြောပြပေးပါမယ် ..
Dental Implant ကတော့ တိုင်တေနီယမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဝက်အူအရစ်ပုံစံ သွားအမြစ်တုကို မေးရိုးအတွင်း သို့ထည့်စိုက်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖုံးကို အနည်းငယ်ခွဲပြီး ထည့်ရတာဖြစ်လို့ မဆိုစလောက်လေး နာကျင်မှုတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ရယ် အဆင့်မြင့် စက်ကိရိယာများ ၊ အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသမှုပေးနေတဲ့ Latha Dental Clinic ရှိနေပါပြီ ..
ကုန်ကျစားရိတ်ကတော့ တစ်ခြား သွားစိုက်နည်းတွေထက် နည်းနည်းလေး ဈေးပိုကြီးပေမယ့် ရေရှည်မှာ စိုက်သွားခဏခဏ မလဲချင်သူတွေအတွက် ဒီသွားစိုက်နည်းကတော့ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲနော် ..
တကယ်လို့သာ သင်ဟာသွားပြန်မစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘေးသွားတွေကျဲလာခြင်း၊ ယိုင်နဲ့လာခြင်း ၊ အပေါ်သွားအောက်ကို ရှည်ထွက်လာခြင်းနဲ့ သွားဖုံးပြဿနာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။သွားနှုတ်ပြီး တစ်လအတွင်း သွားပြန်စိုက်ရင် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
Latha Dental Clinic ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ် ၆၆၁၊ ပထမထပ်၊ လသာနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကိုကုသနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်း ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း 01-371414, 095101483 သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Previous Post Previous post: ကလေးငယ်များ
Next Post Next post: သွားတွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်လို့ရလဲ?